Associates Amazon: Ma jiraa qof lacag sameeya? | Martech Zone
Associates Amazon: Ma jiraa qof lacag sameeya?
Sabtida, Diisambar 23, 2006 Sabtida, Oktoobar 20, 2018 Douglas Karr
Waa inaan noqdaa mid daacad ah… Waan jeclahay inaan haysto kuwayga buugaagta buugaagta boggeyga waxaanan jecelahay inaan kala munaaqashoodo buugaagta aan ka aqrinayo dadka kale ee wax qora. Uma maleynayo inaan waligey ku sameeystay Amazon Associates, in kastoo. Waxay iga dhigaysaa inaan la yaabanahay haddii koontadayda jaaliyadu ay jaban tahay ama dadku si fudud ugama iibsadaan buugaagta bogagga internetka.
Qodobkeyga labaad ee daacadnimo: Marmar dhif ayaan ka dukaameystaa Amazon. Waan jeclahay Xudduudka iyo makhaayadooda iyo kooda Abaalmarinta Barnaamijka. Waxaan leeyahay akoon internet ah oo leh T-Mobile si aan xitaa waqti badan ugu qaato. (Sad, huh?) Aaway barnaamijkii u gudbinta Xudduudda ama barnaamijka la xiriira?
Maanta, waxaan cusbooneysiiyay buug-gacmeedkayga. Waa kuwan akhrinteyda hadda:
Ii sheeg haddii aad dhab ahaantii gujiso oo aad iibsato mid ka mid ah buugaagtan. Sidoo kale, waxaan jeclaan lahaa ka doodistaada buugaagtaan - ama talooyinka dadka kale. Waan jeclahay aqrinta… laga yaabee inay tani tahay wax ka dhexeeya bloggers. Sidoo kale, ii sheeg haddii aad run ahaantii lacag la sameysato Amazon Associates.
Tags: qorayaasha suuqgeyntabuugaagta suuqgeyntasuuq geynbuugaagta iibkaiibinta ayaa la akhriyaa
Boggaaga, Bloggaaga, ama Quudinta Cunnada malagu fidiyaa?
Feb 23, 2007 markay ahayd 4:09 PM
Waxaan ka sameeyay illaa $ 23 muddo ka badan 2.5 sano. Inta badan taasi waxay la timid 3dii ama 4 bilood ee la soo dhaafay.
Apr 13, 2008 at 9: 53 PM
Waxba kamaan sameynin, sida kaliya ee aad run ahaan ”bangiga” uga jabi karto amazon la wadaagtaa waa haddii aad haysato tiro dad ah oo booqanaya bartaada. Ka fiicnaantaada inaad ka hesho buugaag naadir ah oo ku dhufo ebay
Jan 1, 2009 saacadu markay ahayd 7:12 PM
Waxyaabaha aan ku taxay qaar ka mid ah bogaggeyga iyo boggaggeyga in ka badan 2 sano welina ma aanan gaarin xitaa heerka bixinta.
Runtii waxaan jeclaan lahaa inaan ka maqlo qof runti lacag xoogaa ah ka helayo amazon ku xiran.
Jan 1, 2009 saacadu markay ahayd 7:16 PM
Nasiib wacan taas! Weli ma aanan helin. 🙂
Apr 7, 2009 at 11: 49 AM
Waan ku faraxsanahay inaan ogaado inaanan ahayn kan kaliya ee aan waxba ka samaynin Amazon waxaan haystay dukaan waxaanan isku dayay wax kasta oo aan sameeyay waligay waxay ahaayeen £ 0.33p 18 bilood ka dib ma kula tahay inaan iska dhiibo oo samee wax waxtar leh sida barashada Faransiiska.
Jun 6, 2009 at 8: 38 PM
Waxaan haystay balooggeyga muddo sannado ah waligeyna kamaan sameynin boqollay Amazon Associates. Lacag ayaan ku kasbadaa Google Adsense waxbana ma qabto! Amazon Associates waa shaqo aad u tiro badan oo aan waxba ka jirin.
31, 2010 at 4: 42 AM
Doug, bishaan waxaan u diray 16,727 dhagsiin alaabooyin kaladuwan oo kuyaala Amazon, waxaanan kasameeyay lacag dhan $ 23.00 - waan layaabay.
31, 2010 at 7: 53 AM
Taasi waxay aad ugu egtahay waayo-aragnimadayda, Brandon. Xaqiiqdii ma hubo inay jaban tahay ama ay tahay xaalad cabsi leh, oo aad u xun oo saamayn ku leh… laakiin waqtigaygii ayaa sida ugu fiican ku qaatay raadinta dakhli meelo kale!
31, 2010 at 4: 42 PM
Maaddaama qoraalkeygii ugu dambeeyay (11 saacadood ka hor) qasabadeydu ay hadda yihiin 17,368 - oo waxaan helay iib cusub. Waxaan u maleynayaa in furaha uu kor u qaadayo waxyaabaha tikidhada waa weyn. Kaliya ma iibin kartid buugaag kugu filan si aad ugu qalanto. Laakiin iibso wax yar oo ah MacBooks, ama xitaa waxyaabo dijitaal ah (sida filimada) oo leh lacag aad u sarreeya - oo aad samayn karto ugu yaraan $ 75 illaa $ 100 bishii, waa hubaal inaadan ku noolaan doonin laakiin waad iska bixin kartaa kharashka biirka bil kasta.
Jul 29, 2012 markay ahayd 4:07 AM
Shirkadaha Amazon waa qashin. Haddii ay ku bixiyeen guji kasta markaa way u qalmi karaan (waxay kuxirantahay qadarka guji) laakiin waxay isku dayayaan inay helaan qof iibsada wax aysan horeyba uga raadsanaynin shabakadda? Haa sax! Ma jiro qof aan ogahay inuu dime ka sameeyay tan - waqtiga ha iska lumin. Ku raac adsense, ama buysellads. Qof kasta oo kale (mooyee inaad gasho warbaahinta qabaliga ah) uma qalmo waqtigaaga.